प्रधानन्यायाधीश मिश्रले दीपकराज जोशीलाई पेशी तोके « Naya Page
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले दीपकराज जोशीलाई पेशी तोके
प्रकाशित मिति : 13 September, 2018 12:09 pm
काठमाडौं, २८ भदौ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायाधीश दीपकराज जोशीको बेन्चमा बिहीबार पेशी तोकेका छन् । आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पेशी तोकेका मिश्रले बुधबारसम्म जोशीलाई पेशी तोकेका थिएनन् । तर बिहीबार ३ वटा मुद्दामा उनले जोशीलाई पेशी तोकेका छन् । तीनवटा सार्वशजनिक सरोकारका रिटको पेशी जोशीको एकल इजलासमा तोकिएको छ ।
सीताकुमारी शाहीले दायर गरेको उच्च अदालत दिपायल डोटीका बिरुद्धको रिटको पेशी जोशीको बेन्चमा तोकिएको छ । लक्ष्मणकुमार गिरीसमेत मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट पनि उनकै बेन्चमा तोकिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चको तर्फबाट बिष्णुप्रसाद तिम्सिनाले मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको पेशी पनि जोशीकै इजलासमा तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी शुक्रबारसम्म बिदा थप्दै बसेका थिए । शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएपछि जोशी स्वागत गर्न पुगेका थिए । मिश्रकै नेतृत्वमा न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न तयार भएका जोशीलाई बुधबारसम्म पेशी तोकिएको थिएन । तर बिहीबार भने पेशी ताकिएको छ । जोशीले हिजो जसलाई पेशी तोकेका थिए, आज उनले तोकेको पेशीमा उनले मुद्दा हेर्दैछन् । नेपालमा मात्र होइन, अरु कुनै देशमा पनि यो एक नौलो उदाहरण भएको छ ।
एक हजार ८१ शाखा अधिकृतको खुल्यो विज्ञापन, दरखास्त कहिलेसम्म ? (सूचनासहित)
तीन बालिका बलात्कारको आरोपमा अमेरिकी नागरिक हाेटलबाटै पक्राउ
३४ वर्षीया युवती बनिन् फिनल्याण्डको प्रधानमन्त्री
हेल्थपोष्ट इञ्चार्जद्वारा कार्यालयमै थुनेर महिलामाथि रातभर बलात्कार
राम लिम्बू बने ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन–२ को विजेता
प्रहरीका ३० हाकिम विदा हुँदै, कसको हातमा पुग्ला प्रहरीको कमाण्ड ?
पूर्व अधिराजकुमार धीरेन्द्रको घर ढालेर धमाधम…
बलात्कारी बाबुलाई तीन छोरी मिलेर गरे हत्या
स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई ९ लाख दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, गौरिकाको पुरस्कार ६५ लाख
काठमाडौं, २५ मंसिर । काठमाडौं, २५ मंसिर । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)
साग विजेतालाई प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘सरप्राइज’ रकम घोषणा, कुन पदक जित्नेलाई कति रकम ?
काठमाडौं, २५ मंसिर । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) समापानका बेला स्वास्थ्यका कारण
सामाजिक सञ्जालबाट चिठ्ठा पर्‍यो भन्दै १५ करोड ठग्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौं, २५ मंसिर । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर चिठ्ठाको नाममा ठूलो रकम ठगी गर्दै आएका
हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सिधा उडान शुरु
काठमाडौं, २५ मंसिर । हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान शुरुवात गरेको छ
महानगरपालिका–४ सुकेधारा, काठमाडौं ।
2019 Naya Page सर्वाधिकार सुरक्षित